bilisummaa May 6, 2019	Comments Off on Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira?
– MARSAA LAMMAFFAA – Kutaa Afraffaa –
Barreeffama kutaa sadaffaa keessatti tooftaalee humnootni farra-QBO ittifayyadamaa jirani fi gargaarsa isaan mooraa Oromootii argatan laalchhisee waan tokko tokko dhiyeesseen ture. Akkasumas adeemsi OPDO duraanii fi ODP ammaa QBO ni gargaara moo faallaatu hojjetamaa jira jedhee gaafii kaasee; garuu dhimma kana akkan bal’inaan ittideebi’u bulcheen ture. Barreeffama kutaa afraffaa kana keessatti adeemsa ODP laalchisee waanan hubachaa jirun dhiyeessa.
Adeemsi ODP fi hojii isaan dalagaa jiran QBO ni gargaara moo gufuu itti ta’aa jira?
Dhimma kanarratti yaada kiyya yoon barreessu, waanan hubadhe ykn/fi hubachaa jiru ibsuuf malee, dhaaba kanarraa jibba dhuunfaa qabaadhee akka hin taane dubbistoota barreeffama kanaa hubachiisuun fedha. Dabalatees hojii ykn/fi adeemsa isaaniin balaaleffadha malee namootarraa rakkoos ta’ee jibba qabaadhee tii miti. Wanti ani balaaleffadhu immoo waan fedhii uummata bal’aa Oromoo faalleessu fi QBOtti gufuu ta’a jedhee itti amanuu dha.
Maqaa xureessuuf yookaanis olola irratti godhuuf osoo hin taane, akkuma seenaan Oromoo ragaa bahu, dhaabni kun fedhii uummata Oromoo guutuuf jedhamee osoo hin taane fedhii diinaa fi alagaa kabchiisuuf kan ijaaramee fi kaayyoo ijaarameef sanas hojiirra oolchaa akka ture waanuma yaadatamuu fi amanamuu dha. Haa ta’u malee, erga fincila diddaa fi sochii uummata Oromootiin olaantummaan Wayyaanotaa cabee; qilleensi jijjiiramaa biyyattii tana keessatti mul’ate booda; yeroo hooggantootni haaraan dhaaba kanaa waan Sabboonummaa Oromoo calaqqisu dubbachaa turanitti, kan dabree seenaaf dhiisuu wayya jedhamee; dhugumatti dhaabni kun ofjijjiiree uummata Oromootiif dhaabbatinaa laata jedhamee abdiidhaan eegamaa ture.
Amma garuu abdiin sun hunduu qilleensarratti hafe jechuu ni danda’ama. Erga jijjiiramni biyyattii tana keessatti mul’ate booda ODPn dhimma Oromootiif xiyyeeffannaa kennee waan tokko tokko jijjiiruuf akkasumas gaafiilee Oromoon kaaasaa ture keessaa tokko tokkoofillee ta’u deebiin akka kennamu taasisuuf carraa gaarii argatee ture; garuu carraa kanatti hin fayyadamne. Wantootni faallaa kanaa ta’anii argaman garuu hedduu dha. OPDO (ODP)n akkuma amala isaa durii sana har’as alagaa tajaajiluu fi gammachiisuuf dhama’aa jira malee dhimma Oromootiif gurras ta’ee ija hin bananne. Kanaafuu, adeemsi jaarmayaa kanaa QBO gargaaruu caalaa gufuu itti ta’aa akka jiru hubachuun waan nama rakkisu natti hin fakkaatu. Kuni maaliif ta’e? yoo jedhame, sababaalee adda addaa tilmaamuun ni danda’ama.
ODPn maaliif dhimma Oromootiif dursa fi xiyyeeffannaa hin kennine?
Gaafii kanaaf deebii quubsaa argachuun rakkisaa ta’ullee, garuu sababa kanaaf tilmaa adda addaa kennuun ni danda’ama. Akka yaada fi laalcha kiyyaatitti, sababaaleen armaan gadii kun amansiisaa ta’uu danda’u jedheen amana.
Dhaabni kun OPDOrraa gara ODPtti maqaa haa jijjiirratu malee, kaayyoon isaa kanuma ganama ittiin ijaarame waan ta’eef; akkasumas immoo tooftaa, tarsiimoo fi shira durii sana qabatee waan deemuuf, dhimma Oromootiif dursa ykn/fi xiyyeeffannaa kennuun isaaf hin mijatu; amala barame tokko jijjiiruunis rakkisaa waan ta’uuf jechuu dha.
Mootummaa Federaalaa amma of haaromse jedhu? kana keessatti bakkee (iddoo) furtuu ta’e waan argateef, dhimma Oromoo caalaa dhimma biyyattiitiif dursa kennuu filata.
Namootni dhalootaan (dhiigaa fi fooniin) Oromoo hin taane garuu Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatan; Afaan Oromoo dubbatan; waayee Oromoo sirriitti beekan miseensota dhaaba kanaa waan ta’aniif, Sabboontota quuqama Oromoo qabanitti gufuu fi sakaallaa waan ta’aniif, akka Sabboontotni kun dhimma Oromootiif hin hojjenne taasisu
Oromootni dhaaba kana keessatti bakkee furtuu ta’e qabanis tokko tokkoon isaanii fuudha fi heerumsaan Habashoota wajjin waan walitti makamaniif, firoomni kunis dhimma Oromoorratti dhiibbaa guddaa qaba
Dhaaba kana keessa warri dhimma sabaa dhiisanii dhimma dhuunfaatiif dursa kennan (garaaf bultootni) waan jiraniif aksumsa malaammaltummaan hidda baasee waan as gaheef, dhaaba kana keessatti waan fedhii uummata bal’aa Oromoo eegu hojjechuun hin danda’amu
Dhaabni kun dhiibbaa sochii uummata Oromootiin bakkee har’a jiru kana akka gahe dagachuudhaan; oftuulummaa agarsiisuudhaan dhimma Oromoo tuffatee dhiisa
Dhumarratti dhugaan dagatamuu hin qabne tokko, dhaabni kun ABOrraa sodaa waan qabuuf, inaaffaarraa kan ka’e, waan Oromoof tolu tokko hojjechuu hin fedhu. Warra diina ABO ta’an ofitti qabee jaarmayaa jaalatamaa kana dadhabsiisuuf wanti inni hin yaalle hin jiru. Kun ABOf dubbachuu osoo hin taane dhugaa lafarratti mul’achaa jiru waanan hubadheefi.
Egaa, qabxiileen armaan olitti tarreeffaman kun tilmaama kiyyaa fi waanan hubadhe keessaa kan ijoo ta’an cuunfee baasuuf malee, sababaaleen biroos jiraachuu akka danda’an dagatamuu hin qabu. Erga dhimma Saba Orootiif dursa hin kenninee; ODPn filmaata biyyoolessaa dhufuuf jiru kana keessatti deeggarsa Oromoo argachuu ni danda’aa moo jaarmayaa Itoophiyaaf dhaabbatu ta’ee argamuudhaan; deeggarsa saboota, sablammoota fi uummattoota biroo argatee filmaata moo’achuu ni danda’a laata? Isa kana arguuf teenya. Waanuma ta’eefuu dhimma kana ittin deebi’a.